ဒုက္ခသည် | MoeMaKa Burmese News & Media
သည်းညည်းခံပြီး ခံခဲ့ကြရတာပေ့ါ …။
ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကျုပ်တို့ပါဘဲ …။
ကြားယုံနဲ့ ရှောင်တဲ့သူလည်းရှိတယ် ….။
သိန်းငါးဆယ်ပေါက်တဲ့ ဈေးကွက်လည်းရှိတယ် ….။
နှလုံးသားတွေ ဘဝတွေနဲ့ ရင်းခဲ့ရသူတွေရှိသလို
နာမည်ဆိုးနဲ့ ကမ္ဘာကိုကျော်သွားသူတွေရှိတယ် ….။
ဒေါ်လာကိုင် ကမ္ဘာပတ်နိုင်သူတွေရှိတယ် ….။
ရှေ့ဆုံးကပြန် ပန်းပေးချင်တဲ့သူတွေရှိတယ် ….။
အများပိုင်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ် ဆိုတဲ့သူလည်းရှိတယ် ….။
ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်တော့ လှူနေကြတဲ့သူတွေပေါ့ …။
သစ်ခုတ်ဖို့ဝါသနာ ပါကြသူတွေမဟုတ်ဘူး …။
တိဗက် အာဖဂန်က လာသူတွေ
နောက်ဆုံးမှရောက် လမ်းပျောက်ခဲ့သူတွေဘဲ ….။
လိုက်လုပ်မဲ့သူတွေ မဟုတ်နိုင်ဘူး ….။
One Response to ဒုက္ခသည်
Nai Kyaw Sein on July 16, 2012 at 7:50 am
နိုင်ဦးညို ရဲ. ကဗျာကတော့ ထိမိလွန်းတယ် ဒုက်ခသည်တွေဟာ နောက်ဆုံးမှေ၇ာက် လမ်းပျောက်နေသူလို. ကဗျာရှင်ကဆိုထားတယ် သူ.ခံစားချက်နဲ.သူေ၇းတာထင်တယ် ကျုပ်ကအဲဒီလိုမထင်ဘူး ကျုပ် ဘေဘီလုံး
မှအချမ်းသာဆုံး ၀တ်ထု တအုပ်ကိုဖတ်ဘူးတယ် သူဟာဘယ်ဒေသေ၇ာက်ေ၇ာက် တော်အောင် တတ်အောင် ချမ်းသာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ် ဒုတ်ခသည်ဆိုပြီးဝမ်းနည်းမနေသင့် ကိုယ်ေ၇ာက်၇ာအ၇ပ်မှနေပြီး တော်အောင် တတ်အောင် ချမ်းသာအောင်လုပ်ဆောင်၇မယ် သစ်တပင်ကောင်း ငှက်တသောင်းနားနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစား၇မှာ မဟုတ်လားဗျာ။